netcalc: karukureta ye network network maneja | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri network mutariri, zvirokwazvo uri kutsvaga maturusi anogona kukubatsira iwe muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Muenzaniso werudzi urwu rwe zvishandiso ndeye netcalc. Iyo yemahara, yemahara chirongwa iyo inoshandiswa kushandura IP kero tsika uye subnet maski prefixes. Zvese nekureruka kunoshamisa.
Uyu network Calculator Yepamberi inogona kukubatsira kuronga kero kune chero saizi network. Ne netcalc iwe unenge uine chishandiso chakanyatsogadzirirwa maneja maneja, ayo iwe aunogona kuwedzera network, kuita kubvisa, kuwedzera, nezvimwe. Kazhinji maficha ekugadzirisa network, kunyanya kana iine saizi uye iwe unofanirwa kushandisa masiki, uye netcalc unogona kuzviita nekukurumidza. Uye zvakare, remangwana shanduro dzinotarisirwa kuwedzera mamwe mashandiro.
netcalc inokutendera kuti ushande zvese ne IPv4 pamwe neiyo nyowani IPv6, uchishanda chero zvipi chaizvo chaizvo kunyangwe kana iwo maratidziro akanyanyisa. Kuti uite izvi, zvinovimba ne netaddr raibhurari yekugadzirisa kero.
Zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti icho chirongwa yakanyorwa mu python, ichiita kuti inyatso kutakurika. Ehe, iwe uchazoda muturikiri wemutauro uyu wakadudzirwa. Uye, kunyangwe ichishanda ne Python 2, zvinokurudzirwa kuiswa Python 3. Kana iwe uchitova nayo, uye une pombi, unogona kuiisa nayo nyore kana uchida. Uye nenzira, iwe zvakare une DEB mapakeji eDebina-based distros, kana sosi package zvakananga.
Kushandiswa kwayo kuri Yakanyanya nyore, iwe unogona kuona rumwe ruzivo uye kurodha pasi zvaunoda kubva kune yako nzvimbo yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » netcalc: karukureta ye network network maneja